ယနေ့ ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးဟောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မြင့်က ကျွဲ၊ နွားသတ်ဖြတ်မှု ထိန်းချုပ်ရေး မေးခွန်းတခုကို မေးမြန်း ဆွေးနွေးစဉ် “ဘာသာရေး ရောယှက်သည်” ဟုဆိုကာ ဆက်လက် ဆွေးနွေးခွင့် အပိတ်ခံခဲ့ရသည်။
အတိုက်အခံ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ မင်းကင်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးမောင်မြင့်က စက်မှု လယ်ယာသို့ အလုံးစုံ မလွှဲပြောင်းမီတွင် ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွား သတ်ဖြတ်မှုကို ထိန်း ချုပ်မည့် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိနှင့် ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများ လုံလောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ စီမံ ဆောင်ရွက်မည်ကို သိလိုခြင်း မေးခွန်းကို မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်က ယင်းမေးခွန်း မမေးမြန်းမီကပင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်း ဥပဒေများကို လိုက်နာ၍ ဘာသာ၊ သာသနာကို ရောယှက်မေးမြန်းခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် ကြိုတင် သတိပေး ခဲ့သော်လည်း ဦးမောင်မြင့်မှာ အိဒ်နေ့တွင် နွားသတ်ခြင်းကို ထပ်ကာတလဲလဲ ဆွေးနွေးနေသဖြင့် ပိတ်ပင် ခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အသိုင်းအဝိုင်းက ပြောသည်။
ဦးမောင်မြင့်က လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးသည်မှာ “ကျနော်တို့ လက်ရှိ ကျင့်သုံးနေတဲ့ စည်ပင်သာယာ ဥပ ဒေအရ ကျွဲနွားသတ်ဖြတ်ရာမှာ အသက် ၁၆ နှစ်နှင့် အထက် ကျွဲထီးကိုပဲ သတ်ဖြတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အိဒ်နေ့ မှာ တရားဝင် သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကျွဲနွားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့မှ ကျနော် ကောက်ခံရရှိတဲ့ စာရင်း အရ . . . .” ဟု ဆွေးနွေးနေချိန်တွင် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက စကားပြောခွက်ကို ပိတ်ပစ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် က “ဘာသာ သာသနာ ရောယှက်ပြီး မမေးပါနဲ့။ ကျွဲနွား သတ်ဖြတ်တဲ့ စာရင်းပဲ မေးပါ” ဟု ဆိုရာ ဦးမောင်မြင့်က “မှန်ပါတယ်။ ကျနော်တို့က အခုု ကျွဲနွား ပြုန်းတီးမှု အတွက်ကိုက အစ်နေ့ဆိုတာမှာ . . . . . .” ဟု ပြန်လည် ဆွေးနွေးစဉ် ဦးမောင်မြင့်ကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးခွင့် မပြုတော့ပေ။
ဦးဝင်းမြင့်က “ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၁၄၁ အရ ဒီမေးခွန်းကို ကျနော် ဆက်လက် ခွင့်မပြုနိုင်ပါဘူး။ ရိုးရိုးတန်းတန်း မေးလို့ရပါတယ်။” ဟု လွှတ်တော်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် အိဒ်နေ့တွင် ကျွဲ၊ နွား အကောင်ရေ၂၄၅၀၀၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အကောင်၂၅၅၀၀ သတ်ဖြတ် ခံနေရ သဖြင့် ယခု မေးခွန်းကို မေးမြန်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘာသာရေး ရည်ရွယ်ချက် မရှိကြောင်း စက်မှု ဝန်ကြီးဟောင်း ဦးမောင်မြင့်က လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အပြီးတွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
“ဘာသာရေးကို ရည်ရွယ်ပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ အိဒ်နေ့မှာ များများ သတ်နေလို့ ပြောနေရတာ။
နိုင်ငံကို ဖျက်မယ့် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ မေးတာ မဟုတ်ဘူး။ နိုင်ငံကို ကောင်းစေချင်လို့ ဒီမေးခွန်းကို မေးတာပါ” ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။
ကျွဲ၊ နွားများ သတ်နေခြင်းကို လျှော့ချစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တိုက်တွန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ လယ်ယာ ကဏ္ဍ၌ ထိခိုက်မှုများ ရှိလာနိုင်ကြောင်း၊ သတ်မှတ်စည်းကမ်းများနှင့် မညီဘဲ သတ်ဖြတ်နေကြပြီး ဈေးကောင်းပေးဝယ်သဖြင့် လယ်သမားများကလည်း ၎င်းတို့၏ ကျွဲ၊ နွားများကို ရောင်းချလျက် ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့က မွေးကတည်းက နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ခဲ့တာ။ ကျောင်းသားဘဝကတည်းက နိုင်ငံကို တည် ဆောက်ခဲ့တာ။ စစ်သား ဘဝမှာလည်း တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီး ဘဝမှာလည်း နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ခဲ့တာပဲ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဘဝမှာလည်း နိုင်ငံကို တည်ဆောက်ချင်လို့ ပြောနေတာ” ဟု ဦးမောင်မြင့်က ပြောသည်။
ဘာသာရေး ဆိုင်ရာပွဲများတွင် ကျွဲ၊ နွားများ သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးများသည် ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာန၏ စိစစ်ခွင့်ပြုချက်များ အရ ခွင့်ပြုပေးလျက်ရှိကြောင်း စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
ခွင့်ပြုထားသည့် စည်းကမ်းများ ဖောက်ဖျက်မှု မရှိစေရေး၊ ခွင့်ပြုမိန့်ထက် ကျော်လွန် သတ်ဖြတ်ခြင်း မရှိစေရေးနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ခိုင်းကျွဲ၊ နွားများ မပါရှိစေရေးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများက စိစစ် ကြပ်မတ်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် စက်မှုလယ်ယာသို့ အလုံးစုံ မကူးပြောင်းမီ ကာလအတွင်း ခိုင်းကျွဲ၊ ခိုင်းနွားများ ပြုန်းတီးမှု မရှိစေရန်၊ တရားမဝင် သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း မရှိစေရန် အတွက် ရဲ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စည်ပင်သာယာရေး အဖွဲ့နှင့် တိ/ကု ဌာနတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။